2014 - Faminaniana fohy momba ny tontolon'ny Geo - Geofumadas
Desambra, 2013 AutoCAD-Autodesk, jeospatial - GIS, GvSIG, samy hafa GIS, Microstation-Bentley, SuperGIS, uDig, maro
Tonga ny fotoana hanidiana ity pejy ity, ary tahaka ny fanaon'ireo izay manakatona tsingerina isan-taona dia mandatsaka andalana vitsivitsy azontsika antenaina amin'ny taona 2014. Hiresaka bebe kokoa isika any aoriana any, anio fotsiny, izay no taona farany:
Tsy toy ny siantifika hafa, ny fironana dia voafaritry ny faribolana amin'ny zavatra mihatra amin'ny hardware sy ny fampiasana ny Internet.
Amin'ny lafiny iray, takelaka matanjaka kokoa + rafi-pandaminana mahomby kokoa + vahaolana manolo tsikelikely ny solosaina finday = fivarotana takelaka bebe kokoa ... Tsy voatery ho mora vidy kokoa fa mifandraika amin'ny fahafahany Finday finday mandray ny toerany amin'ny serasera noho ny fetran'ny habe.
Ary eo amin'ny lafiny tranonkala: Saika ny zavatra rehetra avy amin'ny rahona, mifanerasera amina rindrambaiko izay maharitra eo amin'ny desktop, ny fampiasana tamba-jotra ara-tsosialy kokoa, famoronana zava-poana hoentina hitondrana ny tena tontolo eo amin'ny tranonkala.
Ao amin'ny rindrambaiko GIS maimaimpoana
Ho taona mahaliana ho an'ny OpenSource izy io. QGis, miaraka amin'ny hetsika fijinjana lehibe; Satria rindrambaiko matotra aorian'ny vondrom-piarahamonina izy io dia hanana fanamby vitsy kokoa noho ny gvSIG, izay manana vondrom-piarahamonina marobe ankehitriny saingy vitsy ny mpamorona feno fanoloran-tena tanteraka. Azontsika tsara sy arahabaina ny ezaka nataon'ny Foundation mba hametrahana ilay maodely, saingy mino koa izahay fa azo natomboka talohan'izay, rehefa betsaka ny vola nampidirina tao anaty fivoarana saika avo roa heny, izay vokatr'izany dia mitentina lafo tokoa amin'ny faharetana.
Ny rindrambaiko maimaimpoana dia tsy ny fifaninanana, fa tsy ny hoe iza no tsara kokoa. Saingy zava-dehibe ny miaina amin'ny alàlan'ny fanalefahana ao anaty tontolon'ny fangatahana avo lenta avy amin'ireo mpampiasa, ny fironana mankany amin'ny rahona, telefaona finday amin'ny rafitra Android, ny multidiscipline izay manambatra ny fahatsoran'ny geomarketing miaraka amin'ny mariky ny topografia, ny fampiharana sensor toerana lavitra sy akaiky ny geoengineering.
Tsy mitovy ny maodely, saingy mila mianatra avy amin'ny roa ianao. Ny fanamby ho an'ny fanatontoloana ny gvSIG dia manome toky, saingy tsy maintsy mamokatra orinasa matotra sy hafatra voalanjalanja. Hendry ny ezaka tsy hamerenana amin'ny laoniny ny kodiarana QGis, saingy tokony hisoroka ny ampihimamba ho fanohanana avo lenta izy ireo.
Talohan'ny nahitantsika ny fikasana miaraka amin'ny Portable GIS, saingy izao kosa no ahitantsika ny fahitana Boundles, nantsoina taloha hoe OpenGeo, izay manolotra fanohanana sy sanda amin'ny vahaolana iray mampiditra ny ampahany amin'ny tontolo iainana:
Ny tsy fahampian'ny QGis ho mpanjifa malefaka,
Ny props fampandrosoana OpenLayers rehetra,
Ny fahafaha-manaon'ny GeoServer tsy azo iadian-kevitra momba ny angona amin'ny Internet, nampiana GeoWebCache mba hahomby kokoa amin'ny fanaovana tessellation,
Ary ny PostGIS / Postgres ho an'ny fitantanana, famakafakana etsy ambany na amin'ny rahona ary maka trano famakiam-boky ampy.
Ilaina ny fanontaniana:
Fa inona ny combo hafa?
Tsy ho tafita amin'ny tranokala ve ny tranomboky?
Inona no ho an'ny GvSIG Boundles?
Inona ny zavatra ifangaroana amin'ny MapServer?
Mety hahatratra ny lazan'ny zokiny ve ny uDIG?
Ho tafita ve ny SEXTANTE raha lasa variana GRASS ny rainy?
Firy ny mpamorona manana izao gvSIG izao?
Ohatrinona no ampiasain'ny ESRI ao anatin'io tarehy tsara tarehy io?
Maro amin'ireo valiny ireo no tsy mahaliana ny mpampiasa iraisana, fa ny mpanapa-kevitra, na satria efa naka azy ireo, na satria mila manao izany.
Ary na eo aza ny fisalasalana, dia tsy maintsy ekentsika amin'ny fahafaham-po lehibe fa tsy mbola nisy toy izany ny rindrambaiko GIS misokatra amin'ny fotoana nampanantena toy izany. Ka ny 2014 dia mampanantena, raha ny firaketana, tsy ho an'ny rehetra. Ireo nalaza tamin'ny famoronana ecosystem, ny hafa noho ny fitomboan'ny fiarahamonina, manokana na inona na inona.
Ny rindram-baiko propriety.
Eto dia tsy mitovy ny fironana, satria ara-toekarena ny tombotsoana, ka hahita fihetsika mitovy amin'ny lehibe isika:
ESRI, amin'ny fialan-tsasatrao.
AutoDesk manantona ireo mpiara-miasa lehibe kokoa noho ny fahalemen'ny krizy tahiry. Fantaro fa ny GIS dia tsy orinasany, miditra amin'ny famokarana, sary mihetsika ary ny maritrano.
Intergraph dia mitombo hatrany ny vahaolana super izay mahaforona an'i Geomedia + Erdas.
Bentley mividy mpanjifa mpandraharaha maro mihazakazaka, amin'ny akany: fotodrafitrasa momba ny injeniera sy ny zavamaniry. Ao amin'ny faritra GIS, ny fironana mankany amin'ny takelaka ihany sy ny fahaizana mifandray amin'ireo ekipa an-tsaha.
Mapinfo ... Mbola misy ve izany eo amin'ny laharam-pahamehan'ny PB?
Ny tsy lehibe amin'ny azy ireo.
Supergis, tamim-pahatokiana amin'ny asan'ny ESRI, ary mitady tsena tandrefana.
GlobalMapper, marin-toerana, mijaly noho ny piraty izay tsy mamela famelana fitaovana tsy manao ny zava-drehetra fa izay ataony ... Ny fanajanay. Tsara izany.
Manifold GIS ... Raha tsy misy aretin-tsaina, taorian'ny haintany maro be dia be raha oharina amin'ny herisetra voalohany nataony.
Ny hafa ... mitady tady majika.
Mahagaga ny fandrosoana efa vitantsika, miaraka amin'ny zavatra iray izay tsy voadinika tao aoriana. Na eo aza ny ezaka dia tsy mahita fomba hanamafisana ny fiaraha-monina izy ireo ... izay raha ny fahitako azy dia tsy hitranga mihitsy raha mifantoka amin'ny fifehezana izay efa lany andro izy ireo. Ny CAD 2D hanaovana drafitra fananganana izay tsy noforonina tao amin'ny BIM, dia voaozona mba hadino.
Tandram-barotra amin'ny 2014
Farafaharatsiny amin'ny tontolon-kevitsika dia mila fotoana fohy ny zavatra fantatsika fa hitranga indray andro any: maodely tena izy (BIM), izay hiarahan'ny fitsipi-pifehezana: ny fisamborana angona, ny geospatial, ny famolavolana CAD ary ny fananganana fotodrafitrasa.
Amin'ny 2014 ny CAD dia hisisika hanao maodely BIM, saingy hiadana ny làlany noho ny fahatanoran'ny fenitra. Ny faharetan'ny OpenSource ao amin'ny CAD indray no omena tsiny, satria izy no manery sy manatanteraka ny fenitra. Anisan'ireo lehibe, ny famolavolana dia hanakaiky kokoa ny fandidiana, ny BIM sasany saingy voafetra ny fampiasana amin'ny sehatra manokana. Ny vokatra tsara indrindra dia hitodika amin'ireo fenitra ho an'ny tanàna marani-tsaina, izay mandroso, amin'izao fotoana izao mba hiheveran'ny mpanamboatra sy ny mpamorona ny fahavononany, saingy mbola betsaka ny miandry.
Ho taona tsara ho an'ny Cadastre izany, andao hotadidintsika hoe firy taona izao, ary azo antoka fa hanohy hamakafaka lalina ny zava-nitranga tamin'ny fanambarana Cadastre ireo mpifoka sigara FIG 2014. Tamin'ny alàlan'ny fifohana sigara dia nandroso be tamin'ny fari-pitsipika sy ohatra tena nisy an'ny LADM, maty be izy Avy amin'ny cartografia mahazatra, ny akademia sy ny orinasa tsy miankina dia niorina tsara, fa tsy ny andrim-panjakana rehetra mandroso amin'ny hafainganam-pandeha mitovy, ka mampametra-panontaniana ny famerenam-bola ary raha ny lalàna momba ny daholobe no miseho ho fampahalalana ao anaty dalambe. izay manamora ny fiainana ho an'ny mpampiasa.
Ka ny orinasa GIS feno dia hitohy hanodina ny geolocation, izay zava-bita lehibe. Saingy fantatsika fa ny GIS dia manan-javatra bebe kokoa atolotra, amin'ny taranja maro izay mbola manary ny harena ao aminy. Amin'ity taona ity dia afaka manantena bebe kokoa amin'ny fisamborana sy ny fampitaovana isika, na dia tsy afaka milaza aza izahay fa hanatevin-daharana ny fironana amin'ireo orinasa izay tsy hitan'ny manam-pahaizana manokana izany.
Hanana ny taona mahafinaritra i Amerika, raha hibanjina ny fiadiana ny tompon-daka eran-tany any Brezila, hisarika hetsika iraisam-pirenena maro izy. Ary ho hitantsika ny fanandramana fanaovana ny Forum Latin American Geospatial Forum ao México.
Tsy maintsy miabo isika. Faly nahita ireo kaonty media sosialy nivadika ho orinasa, nahazo fahefana ny bilaogy, a NosoloSIG izay miverina amim-pahombiazana tsara, zanaka lahy nahavita nahavita sekoly ambaratonga faharoa, reny iray zokiolona manome anay orinasa iray hafa amin'ny taona ...
... tovovavy manaratra ny masontsika toy io voalohany io, tao amin'ny zoro maizina, ao anaty fitoeran'ny fiara, ato am-pianarana, ao amin'ny varavarankely fiainana ...
Tratra sy mahafinaritra ary taom-baovao.
Previous Post«Previous CartoDB, ny tsara indrindra mba hamorona sarintany an-tserasera
Next Post Nahoana no izao tontolo izao Map in 1922manaraka »